တစ်နာရီ လုပ်ခလစာကို ၇ ဒသမ ၈၃ ပေါင် တိုးမြှင့်
Chancellor Philip Hammond delivers his Budget in the House of Commons, London. PRESS ASSOCIATION Photo. Picture date: Wednesday November 22, 2017. See PA story BUDGET Main. Photo credit should read: PA Wire
ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာ တစ်နာရီလုပ်ခလစာကို ပေါင်ငွေ ၇ဒသမ၈၃ ပေါင် (မြန်မာငွေ ၁၄၀၀၀ ကျော်) အထိ ၄ဒသမ၄ ရာခိုင်နှုန်း တိုးမြင့်သွားမယ်လို့ ကောင်ဆယ်လာ ဖိလစ်ဟန်မွန်က ပြောပါတယ်။
လာမယ့် ၂၀၁၈ ဧပြီလကစပြီးအသက်ဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုတိုးမြှင့်လိုက်တဲ့အတွက် အလုပ်သမားတွေရဲ့ အနည်းဆုံး တစ်နှစ်လုပ်ခလစာဟာ ပေါင် ၆၀၀ (မြန်မာငွေ သိန်း ၁၀၀) လောက်အရင်ကထက် ပိုတိုးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
‘လုပ်ခကို တန်အောင်ပေးဖို့ လုပ်တာဟာ ဒီအစိုးရရဲ့ မူဝါဒဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း အသက် ၂၅ နှစ်ကျော် အလုပ်သမားတွေအတွက် National Living Wage ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာ ချမှတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဧပြီလကစလို တစ်နာရီလုပ်ခ ၇ဒသမ၅ ပေါင်ကနေ ၇ဒသမ၈၃ ပေါင်အထိ ၄ဒသမ၄ ရာခိုင်နှုန်း တိုးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် တစ်နှစ်လုပ်ခလစာ ပေါင် ၆၀၀ ထပ်ပိုလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ သူတို့ရဲ့ တစ်နှစ်လုပ်ခလစာဟာ ပေါင်း ၂၀၀၀၀ လောက်ရလာမှာဖြစ်ပါတယ်’ လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
သူဟာ လွှတ်တော်မှာ အဲဒီလို ရှင်းပြရာမှာ နိုင်ငံတစ်ဝန်း ကုန်ထုတ်လုပ်မှု တိုးတက်လာရေး စီမံချက်အကြောင်းကိုလည်း ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ယခင်ဆောင်းပါး၂၀၁၇ရွှေခါးပတ်ဆုရှင် ဘီလူးကျွန်းဂုဏ်ဆောင်လက်ဝှေ့မောင်” စိုးဝင်းသန်း ” နှင့်တစေ့တစောင်း